Trump oo ku goodiyay in uu jari doono deeqda Falastiiniyiinta | Saxil News Network
Trump oo ku goodiyay in uu jari doono deeqda Falastiiniyiinta
January 3, 2018 - Written by editor
Image captionHadalka Trump wuxuu tilmaamayaa in uu qorshaynayo in uu deeqda ka joojiyo Falastiiniyiinta
Waxaa laga yaabaa in dawladda Maraykanka ay joojiso lacagta deeqda ah ee ay siiso Falastiiniyiinta “oo aan rabin in nabadda laga wada hadlo”, ayuu yiri Trump.
Trump ayaa Twitterka ku soo qoray in deeqda uu Maraykanku bixinayo uusan ku helin “ixtiraam iyo mahadnaq toona”
Wuxuu sidoo kale u aqoonsigiisii Qudus uu u aqoonsaday caasimadda Israa’iil uu ku sheegay in ay miiska wadahadalka nabadda “ka leexisay” arrintii kala qaybsanaanta wayn keenaysay.
Falastiiniyiinta ayaa sheegay in tallaabadaasi ay Maraykanka ka dhigtay mid aan dhexdhexaad noqon karin.
Tallaabadii bishii Disembar waxaa iyadana si wayn u cambaaraysay Qarammada Midoobay, iyadoo 128 dal ay ka soo horjeedsadeen tallaabadii uu Trump qaatay.
Muxuu madaxweyne Trump yiri?
Madaxweynaha Maraykanka ayaa dabo socday hadal uu horray u sheegay oo ku saabsaa lacagta deeqda ah ee ay Pakistan siiyaan, taas oo uu ku sheegay in waxa Maraykanku uu ka faa’iido balaayiinta doolar ee deeqda ah ee uu bixiyo ay tahay “been iyo khayaano” oo kali ah.
“Pakistan oo kali ah ma aha dalalka aan bilaashka ku siino balaayiinta doolar” ayuu madaxweynuhu ku billaabay Twitterkiisa Talaadadii.
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 02 Bisha Koobaad 2018
“Tusaale ahaan Falastiiniyiinta waxaan siinaa boqollaal milyan oo doolar sannad walba, haddana abaal iyo ixtiraam midna kuma helno. Xataa ma doonayaan in ay galaan heshiis nabadeed oo ay ahayd in mar hore la gaaro , ayuu yiri.
Maxay Falastiiniyiintu dheheen oo Maraykanku ka xanaaqay?
Qudus waa magaalada loolan ugu badan uu ka taagan yahay adduunka oo dhan.
Israa’iil ayaa sheegata in magaalada oo dhan ay tahay caasimaddooda. Falastiiniyiintuna waxay doonayaan in Bariga Qudus oo ay Israa’iil ku qabsaday dagaalkii Bariga Dhexe ee 1967 in ay noqoto caasimadda dawladda ay mustaqbalka yeelan doonaan Falastiiniyiintu.
Khadka “tareenka Trump” oo laga dhisayo Qudus
Si kastaba ha ahaatee Trump ayaa go’aansaday in uu si rasmi ah Qudus ugu aqoonsado caasimadda Israa’iil, inkastoo looga digay in ay arrintaasi daganaansho la’aan ka abuuri karto gobolka.
Wuxuu sidoo kale sheegay in uu caasimadda Maraykanka u rari doono magaaladaTel Aviv, halkaas oo dalalka kale oo dhan ay qunsulado ku leeyihiin.
Ku dhawaaqitaankaas ka dib madaxweynaha Falastiiniyiinta Maxamuud Cabaas ayaa sheegay in uusan aqbali doonin wax qorshe ah oo ay keentay dawladd Trump.
“Maraykanku wuxuu caddeeyay in uu yahay dhexdhexaadiyo aan daacad ka ahayn hannaanka nabadda,” ayuuna sii raaciyay.
Wuxuuna sidoo kale ku baaqay in Qudus ay tahay caasimadda lama taabtaanka ah ee Falastiiniyiinta”.
Maxay tahay deeqda uu Maraykanku siiyo Falastiiniyiinta?
Twitterka Trump wuxuu dabo socday hadal ay jeedisay Nikki Haley oo ah safiirka Maraykanka u qaabilsan Qaramada Midoobay, waxayna sheegtay in Maraykanku uu joojin doono dhaqaalaha uu ku kabo ha hay’addaha gargaar ee Qaramada Midoobay ee caawiya Faalastiiniyiinta.
Image captionCambaarayntii aadka la isugu raacay ee Qaramada Midoobay xaaladda taagan gacan kama gaysanayso ayay tiri Haley
Hay’adda ayaa bixisa waxbarasho, caafimaad iyo arrimo bulsho oo kale. Maraykankuna waa dalka dhaqaalaha ugu badan bixiya, isaga oo sannadkii 2016kii bixiyay 370 milyan oo dool
Haley oo shir jaraa’id ka hadlaysa ayaa tiri “Madaxweynuhu wuxuu sheegay in uusan doonaynin in uu siiyo dhaqaale dheeri ah amaba uu joojin doono midda uu hadda bixiyo inta Falastiiniyiintu ay ka ogolaanayaan in ay ku soo laabtaan miiska wadahadalka.
Waxay sheegtay in codkii Qaramada Midoobay uu ku cambaaraysay go’aanka Trump in uusan ahayn mid xaaladda taagan wax ku soo kordhinaya.